मलाई मेरो देश, मेरो घर आउन दिनुहोस्
चर्चा भट्टराई काठमाडौं, ३ जेठ
म मेरी बहिनीलाई भेट्न भनेर छोरीसहित माघ महिनाको अन्त्यतिर अस्ट्रेलियाको सिड्नी आएकी थिएँ । आएको केही दिनमै युरोपलगायत धेरै देशहरूमा कोरोनाको संक्रमण सुरु हुन थालेपछि नेपालमा पनि यसको विषयले प्रवेश पायो ।
१ जनामा संक्रमण देखिएपछि सरकारले उच्चस्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समिति बनाएर नियन्त्रण र रोकथामका उपायहरू अपनाउन थाल्यो । कोरोनाको संक्रमण बढ्ने डरले धेरै देशहरूले लकडाउन गर्न थालेपछि नेपालले पनि यसलाई अनुसरण गरेर लकडाउन गर्ने हल्ला चल्न थाल्यो ।
१८ चैतमा नेपाल फर्किने टिकट लिएर आएका हामीले टिकट अगाडि सार्ने निधो गरेर ७ चैतलाई सार्‍यौँ । ७ चैतमा एयरपोर्ट जानुभन्दा केही घण्टा अगाडि नेपालमा सरकारले ८ चैैतदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रोक्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको ३ दिनपछिदेखि सरकारले नेपालभर लकडाउन गरेको पनि आज ५५ दिन भइसकेको छ ।
हामी आमा-छोरी यसरी विगत १ सय दिनदेखि सिड्नीमा छौँ । सुरुका ४५ दिन आफ्ना कामका कारण भए पनि पछिल्लो ५५ दिन सरकारले गरेका लकडाउनका कारण अड्किएर बस्नुपरेको छ ।
आफ्नो घरमा लकडाउनका कारण बस्नुपर्दा त मानिसमा कोकोहोलो देखिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल कोलाहल देखिन्छ भने हामी जस्ता मानिसहरू परदेशमा केही दिनका लागि आएका बेला अड्किएको अवस्था के होला, कस्तो होला ? यसरी तपाईंहरूले सोच्नुभएको छ ? तपाईंहरूमा यस किसिमले सोच्ने संवेदना सकिएकै हो त ? अब के भएपछि, कति बिरामी बढेपछि वा कति बिरामी निको भएपछि खोल्नुहुन्छ यो बन्दाबन्दी ? यो भाइरसको तत्काल निर्मूल हुने वा हराउने सम्भावना त देखिएन, त्यसो भएपछि के भएमा हामी यो खोल्नेछौँ त ? त्यही भएर अब सावधानी अपनाएर हामी नियमित व्यवहारमा फर्कौं ।
म आफ्नो पैसा तिरेर आउँछु र सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बस्छु भन्दा पनि म किन आफ्नो देश आउन नपाउने ?
यस लकडाउनको अवधिमा नेपालबाट करिव ५ हजार विदेशी नागरिकहरू उनीहरूका देश फर्किएका छन् । सबैभन्दा बढी संक्रमण भएको देश बेलायतदेखि क्यानाडा, जापान, अस्ट्रेलियाले समेत आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नो देश फर्काएको छ । फर्कन सहयोग गरेको छ । समन्वय गरेको छ । भुटान जस्तो देशले पनि आफ्ना नागरिक फर्काएको छ तर म मेरो देश फर्कन पाएकी छैन । आखिर किन ?
सरकारलाई मसँग डर हो कि कोरोनासँग ? मलाई फर्कन दिनुअघि कोरोना संक्रमणको परीक्षणको सबै खर्च मैले नै तिरेर गराउन म तयार छु ।
फर्किएर आएपछि विमानस्थलमै वा क्वारेन्टाइनमा गएपछि संक्रमणको परीक्षण मेरै खर्चमा गराउन पनि म तयार छु । हवाईजहाजको टिकट काट्दा नै क्वारेन्टाइनका लागि लाग्ने सबै खर्च पनि तिर्न म तयार छु । यति गर्छु भन्दा पनि मलाई मेरो देश आउन नदिने कारण के हो ?
कोरोना आउन सक्छ भन्ने डर हो भने त्यो डरबाट मैले माथि दिएका भन्दा अझ के गरेमा ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ ? त्यो उपाय दिनुहोस्, त्यो पनि म गर्न तयार छु । तर, विन्ती छ, मलाई मेरो, देश मेरो घर आउन दिनुहोस् । कम्तीमा अहिलेलाई नेपालबाट विदेशी नागरिकलाई आफ्नो देश फर्काउनका लागि भएका चार्टर्ड उडान गरेर फर्कने बेला त्यस देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई आउने व्यवस्था गरिदिनुहोस् ।
सरकारले वा आमजनताले सोचेजस्तो विश्वबाट नेपालीहरू फर्कन्छन् भन्ने सत्य कुरा होइन । उनीहरू सबैका आआफ्ना व्यवहार छन् । पेसा, व्यवसाय छन् ।
ती सबै छाडेर नेपालमा ओइरिन्छन् र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्छ भन्ने जुन मानसिकता देखिन्छ, त्यो सत्य होइन । नियमति अवस्थामा पनि त नेपालीहरू ओहोरदोहोर त गरिरहेका हुन्छन् नि !
कोरोना पनि अरू धरै भाइरसहरू जस्तै तत्काल निर्मूल नहुने र यसको दिगो उपचार तत्काल बन्न सक्ने नदेखेपछि विश्वका सबै संक्रमित देशहरूले आफ्ना गतिविधिहरू नियमित गर्न थालेका छन् । हाम्रो हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ । तसर्थ, अनावश्यक नआत्तिऔँ वा हतोत्साहित नहोऔँ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३, २०७७, १४:४७:००